January 2016 – Gentleman Magazine
သငျက အိပျရာထဲမှာ ညံ့ကွောငျး သငျ မသိသေးတဲ့ လက်ခဏာ ၁၀ ခု လူတိုင်းဟာ လိင်ကိစ္စမှာ သူတို့ ပါတနာတွေကို ကောင်းစေချင်ကြတာချည်းပါ။ အခု ဒီဟာကို ဖတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ ဘက်ကို ခြေတစ်လှမ်း လှည့်လာတာပါပဲ။ ဒီစာထဲမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိင်ကိစ္စ ကျွမ်းကျင်
ပီကေက သင့်ပါးစပ်ကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းစေတာလဲ
ပီကကေ သငျ့ပါးစပျကို ဘယျလို သနျ့ရှငျးစတောလဲ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပျောက်ပျက်ဖို့ သင့်ပါးစပ်ကို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ နယ်သာလန်က စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာ ပီကေဝါးတာဟာ သင့်ပါးစပ်ကို သန့်စေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ လေ့လာချက်မှာ ပါဝင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီကို သကြားမပါတဲ့ ပီကေ ၁၀ မိနစ်လောက် ဝါးခိုင်းပါတယ်။ ဝါးပြီးတဲ့
ဘဲငနျးတှဆေီက သငျယူနိုငျသညျ့ အောငျမွငျရေးသငျခနျးစာမြား ၁။ ဘုံဦးတည်ချက်ရှိခြင်း ဘဲငန်းတစ်ကောင် တောင်ပံခတ်လိုက်တိုင်းမှာ လေခွင်းအားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပင့်အားတစ်ခုဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပင့်အားကို အခြားအကောင်တွေက စီးမျောပျံသန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ (V) ပုံသဏ္ဍာန်ပျံသန်းခြင်းအားဖြင့် အုပ်စုတစ်ခုလုံးကို တစ်ကောင်ချင်းပျံသန်းနိုင်တဲ့အကွာအဝေးထက် (၇၀)ရာခိုင်နှုန်း ပိုပြီခရီးရောက်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့လည်း တူညီတဲ့ ဦးတည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းဆီကို အတူတကွ
နည်းနည်းအိပ်ပြီး အလုပ်များများ ပြီးစေဖို့
နညျးနညျးအိပျပွီး အလုပျမြားမြား ပွီးစဖေို့ ကမ္ဘာကြီးကို လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ Alexander The Great ဘုရင်ကြီးဟာ အချိန်နည်းနည်းပဲ အိပ်ပါသတဲ့။ ဥရောပကို အသက် ၂၆ နှစ်မှာ လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ စစ်ဘုရင် နပိုလီယံရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က ” ယောက်ျားဆိုတာ ၆ နာရီအိပ်ရမယ်။ မိန်းမက
စွဲမက်စရာအနမ်းတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၇)ခု
စှဲမကျစရာအနမျးတှေ ပေးစှမျးနိုငျဖို့ နညျးလမျး(၇)ခု အကြင်နာအနမ်းတွေပေးတာက ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အလွယ်တကူသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီးတော့ စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ အနမ်းတွေချွေနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်း(၇)ခုကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ ၁။ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အနမ်း လူတွေက ရုတ်တရက် အံ့သြမင်တက်မှုတွေကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကောင်မလေးကို အနမ်းတစ်ပွင့် အံ့သြသွားအောင် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
စီးပှားရေးနဲ့ပတျသကျပွီး သိထားရမညျ့အခကျြ(၇)ခု အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါသလား။ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မသိမဖြစ် သိထားရမယ့် အချက်တချို့ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကတော့ – ၁။ ကိန်းဂဏန်းတွေကို သိထားပါ။ စီးပွားရေးသမားတော်တော်များများက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲက အချက်အလက်တွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေတွေကို ပဲသိတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှုန်းထားအမျိုးမျိုး၊ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကို သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမြှင့်တင်ရာမှာ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ လူပျိုကြီးတွေကို ဘာကြောင့် အခွင့်အရေးပိုပေးသင့်တာလဲ ?
မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ လူပြိုကွီးတှကေို ဘာကွောငျ့ အခှငျ့အရေးပိုပေးသငျ့တာလဲ ? မိန်းကလေးအများစုက တစ်ကိုယ်တည်းဘ၀နဲ့ အကြာကြီးနေတဲ့ ယောင်္ကျားတွေနဲ့ ဆုံဆည်းရရင် စိုးရိမ်စိတ်ပိုတတ်ပါတယ်။ တကယ်တေ့ အသက်အရွယ်တစ်ခုထိ အိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့ ယောင်္ကျားတွေကို အုပ်စုနှစ်ခုခွဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပထမတစ်စုက ငွေကြေးချမ်းသာမယ်၊ မိန်းမတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးဆက်ဆံရေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးမယ်၊ ပြီးတော့ ဒီအတိတ်ကနေ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာအရရော ငွေရေးကြေးရေးအရပါ